Torreira Iyo Eriksen Oo La Is Dhaafsanayo, PSG Oo Ku Dheggan Barcelona, Frank Ribery Iyo Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa – Garsoore Sports
Torreira Iyo Eriksen…
Torreira Iyo Eriksen Oo La Is Dhaafsanayo, PSG Oo Ku Dheggan Barcelona, Frank Ribery Iyo Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa
Asc maalin wanaagsan saaxiibbayaal.
Waxaa socda ka dukaameysiga suuqa kala iibsiga cayaartooyda ee bishan Janaayo maadaama 10 cisho ay ka hartay, kooxaha ayaa ku kala hormaraya saxiixyada cayaartooyda. Haddaba waxaan idiinsoo gudbineynaa wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga cayaartooyda oo ay warbaahintu maanta hadal heyso.
Arsenal ayaa dalab Real Madrid u gudbisay iyagoo ka doonaya 22 sano jirka khadka dhexe ee Martin Odegaard. (Sky Sports)
Si kastaba, warar kale ayaa sheegaya in Odegaard uu kusii dhawaanayo inuu ku biiro kooxda Sevilla. (Cuatro – in Spanish)
Paris St-Germain ayaa qorshaynaysa inay si layaab leh ugu dhaqaaqdo saxeexa daafaca dhexe ee Manchester City ee Eric Garcia kaas oo ay Barcelona qaab bilaash ah ku doonayso dhammaadka xilli ciyaareedka marka uu qandaraaskiisa dhaco. (Mundo Deportivo – in Spanish)
Kooxaha Inter Milan iyo Arsenal ayaa ka fikiraya heshiis cayaaryahano is-dhaafsi ah oo ay kula kala wareegayaan Lucas Torriera iyo Christian Eriksen. (Tuttosport)
Tottenham, West Ham iyo Sheffield United ayaa kamid ah kooxo tiro badan oo doonaya inay qaab amaah ah ula saxiixdaan 28 sano jirka Manchester United ee Jesse Lingard. (Talksport)
Chelsea ayaa doorbidaysa inaysan tababaraheeda culaysku saaran yahay ee Frank Lampard ku bedelin tababare ku meel gaadh ah badhtamaha xilli cayaareedka. (Independent)
Balse Lampard ayaa shaqada laga caydhin doonaa haddii natiijooyinka Chelsea aysan deg-deg u horumarin. (Sky Sports)
Arsenal ayaa cayaaryahankeeda khadka dhexe ee Emile Smith Rowe u bandhigaysa heshiis cusub oo ay 40,000 oo Pound toddobaadkii ku siinayaan. (Mail)
Kooxda Turkiga ee Trabzonspor ayaa dooneysa daafaca bidix ee kooxda Tottenham ee Danny Rose oo 30 sano jir ah xilli uu heshiiskiisa uu dhammaadka xilli ciyaareedkan dhacayo. (Mail)
West Ham ayaa dalab cusub oo 32 Milyan oo Pound ah u gudbinaysa saxeexa 23 sano jirka ree Morroco iyo kooxda Sevilla ee Youssef En-Nesyri. (Star)
Bayern Munich ayaa ku dhaw saxeexa 22 sano jirka daafaca midig ee kooxda Reading ee Omar Richards. (Bild)
Wolves ayaa ku dhaw inay heshiis amaah ah ku qaadato weeraryahanka kooxda Real Sociedad ee Willian Jose oo 29 sano jir ah. (Telegraph)
Xiddiga bar-tilmaameedka u ah Arsenal ee Emi Buendia ayaa aqbalay in Norwich City aysan wax 40 Milyan oo Pound ka yar aysan ku fasixi doonin, 24 sano jirkaas ayaa ku rajo weyn inuu xagaaga bixi doono. (Mail)
Manchester United ayaa xiisaynaysa saxeexa 18 sano jirka weerarka kooxda Palmeiras ee Veron (Sport – via Star)
37 sano jirka kooxda Fiorentina ee Frank Ribery ayaa la tilmaamayaa inuu u furan yahay ku laabashada horyaalka Bundesliga maadaama qandaraaskiisa Viola uu xagaaga dhacayo. (GOAL)
Kooxda Ac Milan ayaa dooneysa inay dhammeystirto saxeexa daafaca Chelsea Fikayo Timori dhammaadka isbuucan ( Sky Sports.
HORUDHAC: Liverpool vs Burnley – Reds Oo Dooneeysa Iney Hoggaanka U Dhowaato, Xaqiiqooyinka, Shaxaha Macquulka Iyo Wararka Cayaartooyda